Fahagagana iray hafa avy amin'i Kairosoft: Anime Studio Story | Androidsis
Kairosoft dia niverina indray niaraka tamin'ny fahagagana iray hafa antsoina hoe Anime Studio Story
Manuel Ramirez | | Lalao Android, Tutorials
Kairosoft dia mamely indray amin'ny fahagagana hafa amin'ny maha-simulator ary amin'ity indray mitoraka ity dia mametraka antsika amin'ny toeran'ny famoronana toetra Anime hitondrana azy ho amin'ny laza izy ary eo am-panaovana izay hampanan-karena antsika eny an-dàlana.
Efa fantatsika ny Kairosoft manana karazana lohahevitra mety rehetra mifandraika amin'ny simulator ary amin'ity indray mitoraka ity dia manaitra antsika amin'ny mety hisian'ny mitantana sy tantano ny fahitalavitra iray manontolo amin'ny dikan'izany. Toy ny simulator hafa eto dia ho fantatsika akaiky ny dikan'ny hoe mpamokatra fahitalavitra na scout talent, tsy manadino ny maha kintana Anime antsika. Fisehoana lehibe iray hafa taorian'ny nahatongavan'ny lohateny hafa tamin'ity fandalinana ity tato ho ato antsoina hoe Biz Builderontakx.
1 Retro, pixelated ary Kairosoft, ny lafatra mifangaro
2 Trano fahitalavitra iray manontolo
Retro, pixelated ary Kairosoft, ny lafatra mifangaro
Lalao toa ny Game Dev Story, Bay beasty, Tantaran'ny Cruise World na Gazety Mogul izy ireo dia nanjary ny tsara indrindra raha ny simulator no resahina. Asa tsara sy kalitao tsara ankafizin'ity orinasa ity izay mitondra antsika lohateny iray hafa indray handaniana ora mahafinaritra be amin'izao andro ririnina mangatsiaka izao rehefa mijery ny oram-panala milatsaka amin'ny varavarankely isika.
Raha vantany vao manomboka ny lalao isika, afaka mamorona toetra isika hitondrana azy amin'ny laharana samihafa amin'ny sokajy samihafa toy ny "malaza amin'ny ankizy." Manana studio fahitalavitra iray manontolo izahay izay ahafahana miantoka ny toetrantsika tonga amin'ny kintana.
Trano fahitalavitra iray manontolo
Ao amin'ny studio TV izay ananantsika fanaka hanomezana azy, trano famakiam-boky, efitrano fandaminana ary koa efitrano fandraisam-peo. Ny kilasy dia azo omena mba hampitomboana ny kalitaon'ny mpiasa ananantsika ao amin'ny studio fahitalavitra.
Misy ny Anime Studio Story ireo singa rehetra nahatonga an'ity fandalinana ity nalaza be lalao antsoina hoe Kairosoft. Ny endri-tsoratra mahafinaritra sy vita tsara, mozika tonga lafatra ho an'ny lalao Retro, sary misy pixel ary simulator izay manana lafin-javatra betsaka ka mila andro sy andro hamitana azy amin'ny fotoana iray isika.
Filokana tsara hafa nataon'i Kairosoft izay azo alaina amin'ny € 3,80 ao amin'ny Play Store. Amin'ity vidiny ity ny atiny tsy mampino rehetra ananan'i Anime Studio Story ho anao nefa tsy misy fividianana fanampiny.
Tantara studio studio
Price: € 5,49
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Kairosoft dia niverina indray niaraka tamin'ny fahagagana iray hafa antsoina hoe Anime Studio Story
Microsoft dia mahazo ny Kalandrie Sunrise mahatalanjona $ 100 tapitrisa
Ahoana ny fomba hanampiana ny bokotra "Close Apps vao haingana" amin'ny Nexus 5 misy an'i Lollipop